Buffon oo ka aragti dhiibtay Ronaldo & faa’iidada ay Juventus u leedahay haddii uu ku guuleysto abaal-marinta Ballon d’Or – Gool FM
Buffon oo ka aragti dhiibtay Ronaldo & faa’iidada ay Juventus u leedahay haddii uu ku guuleysto abaal-marinta Ballon d’Or
(Turin) 13 Okt 2019. Goolhayaha kooxda Juventus ee Gianluigi Buffon ayaa shaaca ka qaaday aragtidiisa shaqsiyadeed ee ku aadan saaxiibkiis reer Portugal ee Cristiano Ronaldo.
Gianluigi Buffon ayaa ka tagay kooxda Juventus xagaagii 2018 isaga oo ku biiray naadiga reer France ee Paris Saint-Germain, iyadoo ay isla xilligaas Bianconeri kula saxiixatay Cristiano Ronaldo adduun dhan 105 milyan oo Euro, laakiin Buffon ayaa soo laabtay sannad kaddib.
Haddba Gianluigi Buffon ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska “La Gazzetta dello Sport” ee dalka Talyaaniga wuxuu kaga hadlay Cristiano Ronaldo wuxuuna yiri:
“Kaddib goolkii laba lugaateyda ahaa uu ka dhaliyay kooxda Juventus, markii uu ahaa xiddig ka tirsan Real Madrid, waxaan weydiiyay da’adiisa, wuxuu iigu jawaabay, ’33 sano ma ahan wax xun, miyeeysan sidaas aheyn?”.
Wuxuu intaas ku sii daray Buffon in Cristiano Ronaldo uu yahay shaqsi aad u wanaagsan, maadaama uu waqti badan la qaato si uu kala hadlo arrima qaarkood, waxa ugu fiicanna ay tahay in uu la falgalo asxaabtiisa.
Intaas kaddib Gianluigi Buffon ayaa wuxuu ka hadlay haddii uu sannadkan ku guuleysan karo Cristiano Ronaldo abaal-marinta xiisaha badan ee Ballon d’Or, iyo waxa ay Juventus ku soo kordhin doono.
“Hadii Ronaldo uu ku guuleysto, waxaan rajeynayaa inay la micno tahay in Juventus ay sidoo kale ku guuleysan doonto wax muhiim ah”.
Si kastaba ha noqotee, kooxda Juventus ayaa iskudayeysa in ay ku guuleysato Champions League sannado badan kaddib oo aysan ku guuleysanin, Bianconeri ayaana marar badan xaqiijisay in tartankan uu yahay kan ugu muhiimsan ay dooneyso inay ku guuleysato.
Man United oo soo cusboonaysiisay fikrada ay ku dooneyso inay kula saxiixato xiddig horey bar-tilmaameed ugu ahaa
Kooxda Barcelona oo heshiisyo cusub ku abaal-marinaysa labo ka mid ah xiddigaheeda